Ukuhamba ngokuGreen - Hape International (Ningbo) Co., Ltd.
Ipropathi enokuthenjwa yezinto ezenziwe ngomthi lelona liqabane lithembekileyo kwizixhobo zokusebenza zokuphinda zisetyenziswe, kwaye iinkuni ezivela kwindalo zithambile, azikhuthazi kwaye zisempilweni emzimbeni womntu. Nangona kunjalo, umjikelo weenkuni mde kwaye ixabiso lawo kwezoqoqosho liphezulu kancinci.
Siphuhlise ukusetyenziswa kwezixhobo zoqalo. Uqalo sisityalo esikhula ngokukhawuleza esisetyenziswa njengenye yezinto zokwenza izinto zangoku kunye neenkuni.
Izikhondo zoqalo zihlala zithambile kwiminyaka embalwa yokuqala, ziqine kwisithuba seminyaka embalwa kwaye zenze ulignification. Okokugqibela ziyaphinda zenziwe emva kokuvunwa. Ziyahluthwa ngokuhamba kwexesha, zibonelela ngento elungileyo yokwakha iithoyi. I-bamboo yinto ekhulayo eluhlaza. Ikhula kwiindawo ezininzi zemozulu.
Emzantsi-mpuma China, kukho izibonelelo ezininzi bamboo e Beilun, Ningbo. IHAPE inehlathi elikhulu loqalo kwilali eqhelekileyo yaseBeilun eBeilun, eqinisekisa ukuba kukho izinto ezaneleyo ezenzelwe uphando, uphuhliso kunye nemveliso yeethoyi zoqalo.
Uqalo lunokukhula lube ziimitha ezingama-30 ukuphakama, lube nobubanzi obusembindini obuyi-30 cm kunye nodonga olungaphandle olungqindilili. Njengenye yezona zityalo zikhula ngokukhawuleza, inokukhula imitha enye yonke imihla phantsi kweemeko ezilungileyo! Iindawo ezikhulayo kufuneka ziqiniswe kangangeminyaka emi-2-4 phambi kokuba zivunwe kwaye zilungiswe.
I-bamboo yenye yeendlela zokuphila zezigidi zabantu kwihlabathi liphela. Amahlumela e-bamboo ayatyiwa, asempilweni kakhulu kwaye anesondlo. Iinkuni ezifumaneka kwi-Bamboo Culms zomelele kakhulu. Ngamawakawaka eminyaka, yonke into e-Asiya yenziwe nge-bamboo, kuba iyinto yonke kwaye inokusetyenziselwa iinjongo ezahlukeneyo. Imisebenzi engenakubalwa ixhomekeke kulungiso nakwinkcubeko kolu shishino. Iziqu zoqalo zihlala zivunwa kumahlathi endalo endalo ngaphandle kokonakala komthi.